रेणुलाई नै भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाउने प्रचण्डको तयारी ! – Nepal Online Khabar
रेणुलाई नै भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाउने प्रचण्डको तयारी !
फागुण २९, २०७८ आइतबार 93
काठमाडौं : आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा सबै दल जुटिसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचको लागि आवश्यक तयारीसमेत गरिसकेको छ ।
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै महानगरपालिकामा कस्तो अनुहार अउँछन् त ? भन्ने आम जनताको चासोको विषय बनेको छ । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने भएको छ ।
पछिल्लो समय गठबन्धनमा आव’द्ध दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा महानगरपालिकामा नै गठबन्धन गर्ने सहमति गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ । उक्त भद्र सहमतिअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र विराटन महानगरपालिकाको नेतृत्व कांग्रेसले लिने भएको छ ।
उता, भरतपुर महानगरपालिका नेकपा (माओवादी केन्द्र) लिने लिने मोटामोटी सहमति बनेको छ । चितवन मओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहजिल्ला हो ।
अहिले भरतपुरमा प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल मेयर छिन् । पोखरा महानगरपालिका माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लिने र वीरगञ्ज महानगरपालिका भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले लिने सहमति बनेको छ।
अहिले सबैको ध्यान भरतपुर महानगरपालिकामा छ । यो महानगरपालिकामा सबैको ध्यान हुनुको कारण अहिले एमालेले पनि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हो ।
प्रचण्डले भने भरतपुर महानगरपालिकामा रेनुलाई नै निरन्तरता दिन चाहेका छन् । रेनुले धेरै राम्रो काम गरेको भन्दै पार्टी पँक्तिबाट पनि प्रशंसा भैरहेको छ । खासगरी रेनुले महानगरको मुहार फेर्नेगरि काम गरेको भन्दै अन्य दलका नेताहरुले पनि प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डले गठबन्धनका नेताहरुसँग पनि रेनुलाई नै निरन्तार दिन चाहेको बताईसकेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सकारात्मक जवाफ दिएको चर्चा छ ।
तर, पछिल्लो समय चितवन कांग्रेसले भने आफ्नो पार्टीका उम्मेद्धवारबाहेक अरुलाई बोकेर नहिँड्ने र सहयोग नगर्ने बताईसकेको छ ।
केन्द्रमा जे सहमति भएपनि पालना नगर्ने चितवन कांग्रेसका नेताहरुको भनाई रहँदै आएको छ । तर, अन्तिममा देउवाले भागबण्डा गरे र चुनावी तालमेल भयो भने पार्टीको निर्देशन पालना गर्नुको विकल्प कांग्रेस कार्यकर्ताहरुसँग नहुने पनि चर्चा छ । -दैनिक न्युज नेपाल
Prevप्रकाश सपूतलाई किन धम्क्याउने ? ‘गीतले अपूर्ण क्रान्तिको पीडा दर्शाएकाे छ’ :- बाबुराम भट्टराई !
Nextमोरङमा १८ महिने बालिकाको ब’लात्कारपछि ह’त्या, दुई जना प’क्राउ !
मोरङमा १० जना स्वास्थ्य बि’चौलिया परे प्रहरीको फन्दामा !